November | 2016 | Somaliland Hargeisa City
Shir weynihii Ururka Qoraaga Somaliland ee Sweden oo Stockholm ka dhacay November 26, 2016 –
27 November, 2016 — somaliland1991
Shir weynihii Ururka Qoraaga Somaliland ee Sweden oo Stockholm ka dhacay
Waxa maanta oo ay taariikhdu tahay, 26 November 2016, caasimadda dalka Sweden ee Stockholm, lagu qabtay shir weynihii Ururka Qoraaga Somaliland Sweden (Somaliland Writers Association in Sweden) . Shir weynaha ayaa intii uu socday waxa lagaga dooday qodobbo muhiim ah. Shir weynaha, oo labadii sannadoodba mar lagu qabto xarunta dalka Sweden ee Stockholm.
Haddaba waxa shir weynaha laga soo saaray go´aamo dhaxal gal ah.
Waxa goobtaa shirku ka socday lagu doortay guddi cusub, oo labada sano ee soo socodta maamuli doonta haddii Eebbe yidhaahdo.
Xubnaha guddida cusub.
Guddoomiye cusub: Nuux Ismaaciil Maxamed (Ina Ismaaciil Somali Airlines)
Xogahaye: Cabdiraxmaan Xaashi
Qasnaji: Sayid-Axmed M. Yuusuf (Dhegey)
Xubin: Yuusuf X. Cabdilaahi Xasan
Xubin: Muuse Maxamud Ciise (Dalmar)
Ururka Qoraaga Somaliland ee Sweden (Somaliland Writers Association in Sweden)
Ma dhabaa in UAE, waddanka isu-tagga Carabtu saldhig militari ka furanayaan Somaliland maxaa se faa´iido ugu jirta Somaliland?
13 November, 2016 — somaliland1991
Sida aynnu la wada soconno, waxa tan iyo intii dagaalku ka qarxay dalka Yemen. Dagaalkaas, oo u dhexeeyey ciidamo taabacsan dawladda yemen iyo falaagada Xuutiyuunta, oo taageero weyn ka hela dalka Iiraan. Falaagada xuutiyiinta ayaa gebi ahaanba la wareegay gacan ku haynta dalka Yemen. Arrintani waxa ay halis gelisay ammaanka waddamada, Sacuudi Arabiya iyo khaliijka. Dalka Iiraan oo taageero militari siiya, falaagada Xuutiyiinta. Xulafada uu hoggaaminayo dalka Sucuudiga, ayaa weeraro xagga cirka ku qaaday fadhiisimaha falaagada xuutiyiinta.
Waxa ay markii danbe dalal badan ka codsadeen, in ay xulafada ku soo biiraan. Waxa jira dalal ay ka mid tahay Suudaan oo ciidamo geeyey dalka Yemen. Haddaba xulafada Sucuudiga iyo khaliijka, ayaa u baahday saldhigyo militari oo xagga cirka ah in ay ka samaystaan dalalka geeska Afrika ee Yemen ku dhaw, Sida waddamada, Somaliland, Jabuuti iyo Ereteriya. Waxa ay doonayaan in ay saldhigyo militari iyo cir oo ay kaga duulaan falaagada xuutiyaanta, iyo in ay ka hortagaan saanada militari ee Iiraanu u soo marinayso biyaha badda cas
Sannadkii hore ayey xulafada Sucuudiga iyo khaliijku, saldhig militari ka furteen dalka Ereteriya. Arrintan furashada saldhig militari, oo ay ka furteen xulafada Sucuudiga iyo khaliijka dalka Ereteriya, oo aan si rasmiya loo shaacin.
(Recent media reports indicate that Saudi Arabia and the UAE have contracted Eritrea’s government for assistance in the War on Yemen, using the East African state as a transit and logistics base for their operations, as well as 400 of its troops for cannon fodder in Aden.)
Haddaba waxa muddooyinkii danbe soo baxayey warar sheegaya, in jamhuuriyadda Somaliland, lala soo xidhiidhay, oo xidhiidh lala soo sameeyey, sidii Somaliland loola geli lahaa heshiis ah saldhig militari oo ay ka furtaan. Ilaa hadda labada dhinac ee xukumadda Somaliland iyo xulafada Sucuudigu, kama ay soo saarin wax wara oo amuurtaas ku saabsan.
Waxa aan isku dayey in aan meelo badan ka baadho, in ay arrintani jirto iyo in kale, arrinta ah, in ay doonayaan xulafada Sucuudiga iyo waddanka isu-tagga Carabtu, saldhig militari ka furtaan Somaliland. Haddaba carabka kuma ay dhufan Somaliland, balse dhulka soomaalida qayb ka mid ah, oo u dhaw Yemen, ayey sheegayaan/qorayaan warbixinada qaarkood. Meesha ay warbixintu si dadban usheegaysaa ama uqoraysaa,waa Somaliland.
Waxa jira arrimo dhawr ah oo ay Somaliland uga door-bidayaan meelaha kale ama ay aad u xiisaynayaan Somaliland . Waxaa ka mid ah dhawr kaas arrimood. Qodobada hoos ku qoran.
Somaliland waxa ku taalla magaalo xeebeed taariikhiya, Berbera, kuna taal meel istaraajiyad ah. Waxa ay Berberi u dhaw-dahay masaafad ahaan dalka Yemen, marka loo barbar dhigo waddanka isu-tagga Carabta . Waa magaalo u dhaw bab el mandeb, oo macnaheedu tahay “albaabkii oohinta” “Gate of Grief” waa marinka ka yimaada gacanka Yemen, ee badda cas ka dibna halkaa kaga darsama bad -weynta Hindiya. Waa marin muhiima oo saameyn weyn ku leh dhaqaalaha adduunka.
Berbera oo leh madaar caalamiya, madaarkas oo leh runway, ka mida kuwa adduunka ugu dheer. Loona isticmaali karo saldhig militari oo xagga cirka ah.
Shirkadda DP World, oo Somaliland heshiish xagga dekedda Berbera la gashay 9 may 2016
Shirkadda diyaaradaha ee Fly dubai, oo wiigii 3 maalmood u kala gooshta
Arrimahan ayaa la odhan karaa waxa ay u fududayn kartaa heshiish dhex mara xulafada Sucuudiga iyo khaliijka. Waxa waddanka isu-tagga Carabta, dhawr goor booqasho ku tegay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland, mudane Axmed Maxamed Maxmud Siilaanyo iyo wefti uu hoggaaminayo. Halkaas oo muddadii uu joogay kula kulmay madaxda sar-sare ee waddamada isu-tagga Carabta. Kulamadii ay yeesheena waxa ay isla soo qaadeen arrimo muhiima oo dhawr ah. Wax badan oo muhiima, oo laga wada-hadlayna aan loo sheegin warbaahinta.
Haddaba waa maxay faa´iidada ugu jirta Somaliland haddii ay waddamada isu-tagga Carabtu la galaan heshiis saldhig militari ay ka furtaan Jamhuuriyadda Somaliland
Waxa aan odhan karaa saddex arrimoodba Somaliland faa´iido weyn baa ugu jirta,
Sida aynnu la wada soconno ama aynnu wada ogsoon-nahay heshiiskii DP World shirkadda 4 aad ee dekeddaha addunka ugu weyn ee DP World la gashay xukumadda Somaliland waxa uu si weyn u soo jiitay indhaha caalamka. Waxa ay arrintaasi bilawday, in ay shirkaddo iyo dalal badan oo marka hore quud-daraynayey in xidhiidh la sameeyaan Somaliland ay iminka bilaabeen in ay ku soo dhiiradaan, si toosna ula soo xidhiidhaan, iyaga oo aan dawladda taagta daran ee federaalka Soomaaliya tallo waydiinayn.
Shirkadahan iyo xukumadahan, oo eegaya danahooda gaarka ah, Somalilandna ka dhex arkay maslaxadooda (interest). Waana sababta keentay, in ay toos ula xaajoodaan xukumadda Somaliland. Haddaba arrintani haddii ay dhab noqodto waa arrin siyaasiyan Somaliland guul weyn u ah. In dalalka isu-tagga carabtu ay heshiis toosa la geli karaan xukumadda Somaliland. Somaliland ka saaraysa goodoonka siyaasadeed.
Marka ay waddamada isu-tagga carabta heshiis la gelayaan Somaliland, waxa ay ka kiraynaysaa dhul, meel weyn oo ay saldhig militari ka dhigtaan. Waa meel istarajiyad ah. oo bad iyo madaar leh. Kiraynta ay Somaliland ka kiraynayso dhulkaas, waxa Somaliland ka soo gelaya dhaqaale sannadkii noqon kara 100- 200 miljan dollar.
Somaliland oo markaa awoodeeda dhaqaale kor u kacayo.
Arrinta saddexaad ee aqoonsiga.
Labadan arrimood ee aynnu kor ku soo xusnay waxa ay Somaliland u fududaynaysaa arrinta aqoonsiga, mar haddii Somaliland lala gelayo heshiisyo caalamiya. Waxa marka danbe iman doonta Somaliland hala ictiraafo. Hase yeeshee arrintaasi waxa ay u baahan tahay, in si fiican looga shaqeeyo loogana hawl galo.
Somaliland waxa ay imminka leedahay waayo-aragnimo badan oo ay ka dhaxashay heshiiskii ay wada galeen shirkadda DP World. Habka heshiisyada caalamiga loo galo.
In kasta oo kani ka duwanaan doono oo uu yahay saldhig militari
Maxaa Somaliland la gudboon oo u baahan in ay xisaabta ku darsato.
In madaxbannaanida jamhuuriyadda Somaliland ay tahaymid lama taabtaan ah
In la daraaseeyo faa´idada iyo khasaaraha ugu jirta saldhig militari oo Somaliland laga yagleelo.
Waxaa kale oo lagama-maarmaan ah, in la ogaado, inta sannadood ee uu saldhig militari ahaanayo.
Kharashka sannadkii ee ay bixinayaan
In ciidamada militariga Somaliland ay tababar u furaan.
In Somaliland kala shaqeeyaan arrimaha la dagaalanka argagixisada isku deyeysa in Somaliland nabadeeda iyo degganaashaheeda wiiqaan ama mijo-xaabiyaan.
In lala xisaabtamo haddii ciidamada waddanka isu-tagga carabtu ee saldhiga ka hawl-gelaya ay Somaliland denbi ka galaan. Waa in sharciga la horkeenaa
Maqaalkan waxaa qoray oo xuquuqdiisa iska leh
Halkan Hoose ka daawo sawirro taariikhiya oo tilmaamaya xidhiidhka cusub ee u bilaabmay waddamada jamhuuriyadda Somaliland iyo waddamada isu-tagga carabta.
Waxa dunnida ka bilaabmay tartankii ama loolankii awooda militari ee furashada saldhigyo militari. 15 okt 2016
Waxa dunnida ka bilaabmay tartankii ama loolankii awooda militari ee furashada saldhigyo militari.
Maqaalkani waxa uu daba socdaa maqaalkii hore. Intiinii akhriday maqaalkii “Ma dhabaa in UAE, waddanka isu-tagga Carabtu saldhig militari ka furanayaan Somaliland maxaa se faa´iido ugu jirta Somaliland?”
Somaliland oo khariirada adduunka ee saldhigyada militari lagu daray
Somalilands president Silanyo, meets UK Navy Commander, at the Berbera Port
Waxa muddooyinkii danbe adduunka si guud ugu soo badanayey, in lagu tartamo furashada saldhigyo militari. Waxaa inta badan dadku maqlaan, in dalka Maraykanku meel heblaayo saldhig militari ku leeyahay.
Haddaba waxaa muddooyinkii danbe soo kordhayey, in dalal kale oo adduunka ku yaallaa ay bilaabeen, in iyaguna saldhigyo militari ka furtaan dalal kale oo ay is-leeyihiin dantiinna ayaa ku xidhan ama ku jirta.
Dal marka uu dal kale saldhig militari ka furto, waxa ay macnaheedu tahay, dhoolatus ah cudud miltari ayaan leeyahay. ”Anigaa goobtan ka atoore ah” . Dal kasta waxa uu eegayaa maslaxaddiisa gaarka ah. Hadday tahay , mid siyaasi ah, mid dhaqaale iyo mid ah awood militari.
Dalalka ka furta ama furanaya saldhig military dalal kale , waxa ku baxa kharash aan la xisaabin karin, oo aad iyo aad u badan.
Xukumadda dalka jamhuuriyadda Somaliland, Wasiirka Wasaarada Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka Farxaan Aadan Haybe, oo wiigii hore aynu soo dhaafnay shaaca ka qaaday, in dalka isu-tagga carabta, ee Abu-dabay (Abu-Dhabi) ka codsaday, madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland, AXmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, in ay ka furtaan Somaliland, saldhig militari. Waa markii ugu horreysay ee xukumadda Somaliland, arrintaa ka hadasho , tan iyo intii ka danbaysay ee warbaahinta aad loogu soo qoray .
“Mar wasiirka wax laga waydiiyay inay Dawladu Madaarka berbera ku wareejinayso dawlada imaaraadka carabta si ay Saldhig uga dhigtaan, waxa uu yidhi:- “ Madaxweynaha waxa ay waydiisten Imaarad Abu Dubai in ay Saldhig ka samaysataan Madaarka Berbera, waa codsi, codsina macnihiisu maaha waa la iibiyey, xitaa heshiis lama galin, Dawlad Dhulkeeda in ka mid ah Dawlad kale ka Iibisayna ma jirto, Jabuuti ayaa ugu dhaw oo waxa ay ka faa´iidaysataa waxa weeye Saldhiyo ayey Dawlado kale ku leeyihiin.”
Waddamada Jabuuti, Ererteriya, Soomaaliya. Waxaa ku tartamaya in saldhig militari ka furtaan, dalal dhawr ah.
Dalka Shiinaha oo doonaya in saldhig militari ka furto dalka la jaarka ah Somaliland ee Jabuuti. Xagga ay waddamada isu-tagga carabta iyo Sucuudigu ka furanayaan saldhig militari dalka Ereteriya. Dalka kale ee Somaliland la jaarka ah ee Soomaaliya, oo dalka Turkigu ka furanayo saldhig militari.
Dalka Jabuuti, haddaynu soo qaadano waxa uu ka mid yahay dalalka adduunka ugu faqiirsan. Waxaase dhaqaale badani ka soo galaa dhaqaale aad ubalaadhan dawladdo dhawr ah oo saldighyo militari ku leh dalka Jabuuti. Sannnad walba, waxa uu dal kastaa oo saldhig militari ku leh dalka Jabuuti, uu bixiyaa lacag gaadhaysa inta u dhaxaysa 70-100 milyan oo dollar.
Dalka Ruushka ayaa isaguna doonaya in saldhigii militari ee uu ku lahaa dalka Masar sannadkii 1972, magaalada Sidi Barrani, dib u soo celiyo. Magaalada Sidi Barrani, waa magaalo xeebeed yar oo 100 km u jirta xadka dalka Liibiya
Amuurtan oo xukumadda dalka Masar ka talisaa ay beenisay, kuna tilmaamtay war aan waxba ka jirin.
“Egyptian officials have denied a report in the Russian media which claimed that Moscow and Cairo are negotiating a deal on a Russian airbase in western Egypt.
Egypt’s Al-Ahram daily reported the president’s office as stating that it would not allow foreign foreign military bases on Egyptian coasts”
Joornaalka magaciisa la la yidhaahdo. Gulfnews, ayaa maqaal ku soo dabacay bogiisa internetka , bishii Maarsh 2016, in dalka Sucuudi Carabiya, saldhig militari ka furanayo dalka Jabuuti. Arrintaan waxa u xaqiijiyey safiirka dalka Sucuudiga, Dhia-Eddin Bamakhrama
“The agreement will cover cooperation in all terrestrial, marine and aerial military aspects,” Bamakhrama told London-based Al Sharq Al Awsat daily
Haddaba su´aasha is weydiinta lihi waxa weeyi, waa maxay faa´dada ugu jirta dalka jamhuuriyadda Somaliland saldhig military oo xulafada waddamada isu-tagga carabta iyo Sucuudigu ay ka furtaan, dalka Somaliland?
Arrintani waa arrin muhiima oo u baahan in la daraaseeyo, u baahan in khuburo reer Somaliland ah oo ku takhasustay xagga arrimaha militariga iyo istaraajiyadda iyo siyaasadda soo baadhaan.
Waxa aan odhan karaa afar arrimoodba Somaliland faa´iido weyn baa ugu jirta,
Tababar loo fidiyo ciidamadda Somaliland
Qodobadan oo faahfaahsan waxa aad ka helaysaa maqaalii hore ee qoray ee magaciisu ahaa
“Ma dhabaa in UAE, waddanka isu-tagga Carabtu saldhig militari ka furanayaan Somaliland maxaa se faa´iido ugu jirta Somaliland?”
©Nuux Ismaaciil Maxamed (Ina Ismaaciil Somali Airlines)
Halkan hoose ka daawo sawirada dalalka ku looltamaya saldhigyo military oo ay ka furtaan bariga Afrika.